IMBALI YOBUNGCALI BOBUNGCWELE: IMVELAPHI, INKULUMBUSO, AMANDLA, NOKUNYE
AmaKristu asebenzise ifayile ye- Imbasa ye-Saint Benedictnjengoko bekholelwa ukuba inokunceda ukuzikhusela kwimikhosi yobubi; imbasa enembali enomdla, esiza kuyaphula kweli nqaku. Ungaphoswa naziphi na iinkcukacha kule mbasa yamandulo.
1 Imvelaphi kunye nembali yembasa ye-Saint Benedict
3 Amandla eMedical Benedict Medal
4 Ukwazi iindawo zeMedali eBenedict
Imvelaphi kunye nembali yembasa ye-Saint Benedict
Isetyenziswe ngamaKristu amaninzi namhlanje, njengoko bekholelwa ukuba inokukhusela kwimikhosi yobubi, siyifumana Imbasa ye-Saint Benedict. Nangona kunjalo, akukho namnye okwangoku owaziyo ngokuqinisekileyo ukuba yaveliswa nini imbasa yokuqala; Inye kuphela into eyaziwayo kukuba ngaxa lithile kwimbali iileta zafunyanwa kumqolo wembasa.
Nangona kunjalo, ngenkulungwane ye-1647, ngokukodwa ngo-XNUMX, ityala labanjwa kwabasetyhini ababini ngezityholo zobugqwirha. Into eyenzekileyo kukuba abafazi babhengeza ukuba abanakwenza nto kwindlu yeemonki yaseBenedictine, kuba yayikhuselwe luphawu lwe Santa Cruz.
Ngale ndlela kwenziwa uphando eMetten Monastery, eseBavaria, namhlanje eyiJamani. Kule ndawo bafumene imizobo emidala ebonisa iminqamlezo, eyayineeleta ezininzi zokuqala.
Iileta ezikulo mqondiso zazingenakutolikwa, kodwa umfanekiso ka-Saint Benedict wase-Nursia wafunyanwa kamva kwincwadi yethala leencwadi, ephethe oonobumba abafanayo namagama.
Ngapha koko, kwafumaniseka ukuba kukho umbhalo-ngqangi wangaphambili, osusela kwinkulungwane ye-XNUMX, owawubhalwe eOstriya, owawusuka apho lo mbhalo-ngqangi apho wawufumaneka khona lo mzekeliso.
Ngale ndlela, yayinguPopu Benedict XIV owaphumeza imbasa ngo-1742, kwaye wafaka nefomula yentsikelelo kwiRite Rite. Nangona kunjalo, Imbasa ye-Saint Benedict igqityiwe, khange yenziwe de kube li-1880, unyaka apho iminyaka eyi-1400 ukusukela ekuzalweni kuka USanta Benedict waseNursia (480-547 emva kukaKrestu).
UPopu Benedict XIV, ngonyaka we-1742, nguye owanikezela uxolelo kwinkundla Imbasa kaSanta Benedict wase-Nursia, ukuba nje ophetheyo uhlangabezana nale miqathango ilandelayo:
Yenza iSigramente soXolelwaniso.
Fumana uMthendeleko oNgcwele.
Thandazela uBawo Oyingcwele kwiminyhadala emikhulu, enjenge: I-Ista, iPentekoste, i-Immaculate Conception, iCorpus Christi, uBathathu Emnye oNgcwele, njl.
Nceda amahlwempu nabagulayo.
Thandaza rhoqo Ingcwele yeRosari.
Khuthaza ukholo lobuKristu.
Kwelinye icala, nanjengoko uPopu Benedict XIV wanikezela ngokuzithoba kubo bonke abo bathobela oku kungasentla, naye wanikezela ngokuzithoba kwezi meko zilandelayo:
Ukuba umntu uthandaza ngaphambi kweMisa eNgcwele okanye ngaphambi kokufumana uMthendeleko, ufumana iintsuku ezili-100 zokuzonwabisa.
Ukutyelela iCawe, ukukhuthaza inkolo yobuKrestu ebantwaneni, nokutyelela abagulayo kube kanye ngeveki kuya kunika iintsuku ezingama-200 zokuzonwabisa.
Wonke umntu obhiyozela njengomlungiseleli okanye okhoyo kwiMisa eNgcwele, kunye nabo bathandazela abazalwana babo abangamaKristu kunye neenkokheli zabo, bayakuba neminyaka esixhenxe yokuziyolisa.
Ngexesha loSuku lwaBangcwele bonke, abo bakhapha abagulayo baya kuba neminyaka esixhenxe yokuzihlaziya.
Nabani na othandazela imisebenzi ye-Benedictine Order uya kuba nakho ukufumana ubabalo lwesahlulo sayo yonke imisebenzi elungileyo eyenziwayo yi-Order.
Nabani na othandazela uBawo oyiNgcwele kunye neemfuno zakhe, nabani na othandazela ukuphakanyiswa kweCawe yamaKatolika, ngoLwesine oNgcwele okanye ngomhla wovuko, uyakufumana ubabalo lwezinto azifunayo. Oku nje ukuba uye wavuma kwaye wafumana umthendeleko ngaphambi kokuthandaza.
Amandla eMedical Benedict Medal
Ngaphandle kwamathandabuzo, i Imbasa ye-Saint Benedict Iyaxatyiswa kwaye iyathandwa ngamakholwa amaninzi angamaKristu, kuba ayibandakanyi amaKatolika kuphela, kodwa, umzekelo, ama-Anglican, ama-Orthodox kunye namaWisile.
Esinye sezizathu eziphambili zokuba sixatyiswe kangaka kungenxa yokuba kukholeleka ukuba sinokuzikhusela kwimikhosi yobubi, njengobugqwirha kunye nalo naluphi na olunye uhlobo lwempembelelo yobusathana.
Kwakhona, i Imbasa ye-Saint Benedict Isetyenziselwa ukunqanda abantu abaneenjongo ezimbi, kugcina ubhubhane kwaye kunokunceda ukuthintela ukosuleleka kwabo, njalo njalo.
Kwelinye icala, amaKristu akholelwa ukuba imbasa inokunceda ekuthinteleni nasekunqobeni izilingo, ezinjengokwaphula ubunyulu, kunye nokunceda ukuguqula umoni. Ngendlela efanayo, inokunceda ukunyanga izilwanyana ezigulayo ngobhubhane, ukunyanga abantu abagulayo, njalo njalo.
Olunye lweempawu eziphambili kunye ezibalaseleyo ze Imbasa ye-Saint Benedict Kungenxa yokuba inamandla amakhulu okukhupha iidemon; esona sizathu sokusetyenziswa kwabefundisi abaziingcali kwiidemon.
Kungenxa yokuba iCawa yamaKatolika ichaza imbasa njenge-sakramente, ethi ngokwenkcazo ibhekisele kunyango lokucoca nokucoca umphefumlo kwizono zokufa nezokufa; umphefumlo unokunyangeka kwiintlungu ezibandezelekileyo kunye nokubandezeleka ngenxa yezono ezichaziweyo.
Ukwazi iindawo zeMedali eBenedict
Ngokomgaqo, i Imbasa ye-Saint Benedict luhlobo lokuphakanyiswa kothando lukaThixo, amandla akhe kunye nemisebenzi yakhe elungileyo. Imbasa yahlukile ngasemva nangasemva, esiza kuyichaza kweli candelo.
Ngaphambili kwimbasa ye-medallion USanta Benedict waseNursia, kunye nebinzana elithi "Eivs in obitv nostro praesentia muniamvr!", Oko kuthetha ukuba "Ngexesha lokufa kwethu masikhuselwe bubukho bakhe."
Ngokufanayo, kumfanekiso ongaphantsi San Benito Esandleni sakhe sokunene uphethe umnqamlezo, kwaye ngesandla sasekhohlo uphethe incwadi yemithetho, incwadi ebhalwe ngcwele kwaye ibandakanya ibinzana eliqingqiweyo kwindondo.
Kwelinye icala, ngasemva kwendondo ungabona uhlobo lomnqamlezo, owaziwa njenge Umnqamlezo weSan Benito, enonobumba abathile abenza oonobumba bokuqala bamagama:
I-SPB Umnqamlezo kaBawo oyiNgcwele (Crvx Sancti Patris Benedicti).
I-DSMD Musa ukuvumela inamba ukuba ibe sisikhokelo sam (engeyiyo iDraco Hlala Mihi Dvx).
I-SSML Umnqamlezo oyiNgcwele ube kukukhanya kwam (Crvx Sacra Sit Mihi Lvx).
RS Buya umva, Sathana! (UVade Retro uSathana).
VB Sela ityhefu ngokwakho (Ipse Venena bibas).
I-SMV Andonelisekanga zizinto ze-banal (Nonqvam Suade Mihi Vana!).
MQL Ityhefu sisithiyelo sakho (Svnt Mala Qvae Libas).
Ukuba ulithandile inqaku lethu kwaye ufuna ukufunda ngakumbi ngalo USanta Benedict waseNursiaSiyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo kwimithandazo yakho: